Rooble oo khilaafkii baasiin kusii shubay,’Anigu hal mowqif ayaan lee yahay,”.
September 13, 2021 Xuseen 7
Raysalwasaare Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu Qaramada midoobay usheegay inaanu ka laba labayn doonin dedaalada uu cadaalada ugu raadinayo Ikraan Tahliil.
Rooble ayaa waxaa kale oo uu sheegay in uu wado dadaallo kala duwan oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa in uu sii faafo khilaafka ka dhex taagan asaga iyo Madaxweyne Farmaajo.
Raysal wasaare Rooble ayaa adkeeyay in kiiska ikraan aan la siyaasadeyn ee kaliya loo arko xaq uu leeyahay muwaadin Soomaaliyeed oo ay tahay in isku aragti laga ahaado.
Beenaale. Uu beenta u sheegaya. Cadaalad raadis maaha EE waa qabyaalað iyo cadiifad ay ku abuureen kooxda qaran dumis EE hotell jaziira.
@ Darwiish primister waa daacad waana nin ka damqanaya dhibaatada ay kooxda maafiyada ah ee maxaysatada ah kunanaaxay dhiiga muwaadiniinta soomaliyeed ay ku hayaan, qof muwaadin ah ayaa oo u shaqaynayay hay adaha dowlada kuwooda loogu talagalay amniga ayaa la afduubtay oo ay waliba afduubeen kuwii ay la shaqaynaysay ilaa iyo hadana aan raq iyo ruux la hayn. ini farmaajo haduusan dulmiile daalim ah ahayn muxuu u daboolayaa case ka Ikraan Tahliil muxuu u diidayaa in la baaro oo ay cadaalad hesho gabadhaasi, waxaan qabaa waa cadahay dabcan danbiguu qayb ka ayahay waana wax lagusoo barbaariyay dhibaataynta iyo tacadiga loo gaysto gabdhaha soomliyeed oo horuu kugsi ugu gaystay kuwo hore. waxaan qabaa oo uu qofkasta oo damiir dadnimo diir soomliyeed lihi qabaa in la baaro lana dsaba galo dulmigaas dadkii gaystay cadaaladana la geeyo.
PM Rooble fursad qaali ah baa u soo baxday.
Kiiska Ikraan Tahliil waa kusigii
Madaxweynenimada oo qof ah !!.
Taariikhda shaqo ee PM Rooble waa mid wada Fursad, Nasiib iyo Ka faa’iidaysi ah.
Tan oo kale na maba cafiyo !!.
And what an opportunity for a lifetime opportunist
waa beenale maangaab ah oo ku shaqeeya wixii uhuro ugu soo dhiibay qolka mombaasa kunyaal.
gabadhu caddaalad waa in ay heshaa taas waa run xaq ah. laba bilood ayuu nacaskani ka aamusnaa oo uu daboolayey kiiska gabadha ma hadda ayuu jaajuusnimada uu keenya ugu adeegayo caddaalad ku bartay
Horta AFLAGAADADA aynu hoos u yara dhigno!
Marka aan wax ka iraahdo isqabqabsiga hadda socda, iima muuqato in Soomaalidu sidan QARAN ku sii ahaan karto, waayo dad baa isku khaldaya caasimadda & dawladnimada. Waxa ayaamahan noo muuqanayey, oo aan la iska indhotiri karin, in INQILAAB QABIILAYSAN uu Muqdisha ka socday, oo welina ka socdo.
Waxa noo muuqanayey in wasaaraddii warfaafinta uu si BEELAYSAN ula wareegay wasiir ku xigeenka wasaaraddu; halkaa inqilaab baa ka dhacay. Wasaaraddii amnigana waynu aragnay sida uu wasiirka koowaad u afduubtay. Qoor-goyn & Afduub shaqsi baynu ka hadlaynay, laakiin afduub wasaaradeed & qoorgayn dawladnimo baa hadda nagu soo korodhay.
Waar yaa arkay madaxweyne aan iscasilin oo aan xoog kursigiisii looga qaadin oo halkan soo fadhiya oo la leeyahay kursigiisii aniga ayuu igu wareejiyey oo hawshiisii aniga ayaa qabanaya, oo isna qaylyahayo oo uu leeyahay waar dee saw anigan soo fadhiya maxaad ii dhaxal wareejinayDaan?!!!!
Haddiise ay qolo u aragto in caasimadda ay iyagu iska lee yihiin, waa sida dhaqdhaqaaqyada hadda socda laga fahmi kara e, dawladnimadana ma iyagaa iska leh mise Soomaali bay ka dhaxayDaa?! Haddii, marka, sida hadda muuqata wax lagu sii wado oo la iska qabanwaayo, dawladnimada Soomaaliya khatar bay ku jirtaa. Marka aan sidaa leeyahay, reernimo kuma difaacayo madaxweyne Farmaajo, laakiin dawladnimada & wadajirka Soomaaliyeed bay weli lexejeclo iga haysaa.
Waxaa soo haray kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Aabaheed baan dhagaystay oo si deggan oo wanaagsan buu u hadlay, oo waxa uuna ka dhawaajiyey in ay qabsadeen qareenno oo ay kiiska ka fureen debed & gudoba. Haddaba, waxa aniga & dad badanba u muuqan kara in kiiska laga daayo siyaasadda & marin habaabinta. Sidaa daraadee, waa in NISA ay la wadaagto xogtooda guddiga ammaanka si ay fudayn ugu noqoto, haddii wax ka jiraan & haddii kaleba hay’adaha baaritaanka, maxkamadaha & qareenadda kiiska gelidoona.
Marnaba kiiskaan yaan gorgortan laga gelin sida Dr. Tahliil sheegay. kiiskana waxaa gelaya dawladda soosocota haddiba dawlad la helo, waayo tan wakhtigeedii waa dhammaaday oo isqabqabsi bay ku jirtaa; sidaa daraaddeed, kiiskan ma geli karto bataatanba.
Gunaanadkii, hadday xukuumadda XILGAARSIINTU cid wax u qabanayso, caqabadaha & buuqa siyaasadeed ay fureen & inqilaabka beelaysan haka hor qaadeen doorashooyinka & dawladnimada.
Faqashta markii la qabto, waxay u baryootamaan sidii midgaha iyo ka
Midgaankii Farmaajo ahaa maanta waa la hayaa. Ha u baryootamo sidii caadadood ahaan jirtay, naagta midgaanta ah.
Farmaajo miyuusan xishoonahayn? Hade mar hada maaliyada iyo awood kasta dowladeed Rooble la wareegey maxa uu haray Farmaajo?
Farmaajo Gedo ha iska aado, wax uga harsan Muqdisho ma leh. Nin suuqa bakaaraha joogo iyo Farmaajo isku awood waaye maanta. Duuf ku baxe Farmaajo ha xishoodo ha iska aado Gedo, Gedo Jubbaland waaye waxa madaxweyne ka Axmed Madoobe.